Libanona: Ny Sektarisma Sy Ireo Vondrona Mikatsaka Ny Fandriampahalemana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2017 7:20 GMT
Angamba ny tahotra hisian'ny fifanolanana eo amin'ny samy sekta (antokom-pivavahana) no antony nahatonga ireto mpitoraka bilaogy marobe nanoratra momba ny sektarisma tamin'ity herinandro ity (herinandron'ny 12 Feb 2007). Nefa, araka ny efa nampoizina, dia tsy mitovy hevitra ny amin'ny fomba hamaritana na hiatrehana io olana io ireo mpitoraka bilaogy ireo. Raha toa ny fifandanjàna no hitan'ny sasany fa nampirefotra azy io, na nety hiteraka loza ny tsy firaharahiana izany, ny hafa kosa dia mihevitra izany ho fitahiana sady mampiavaka an'i Libanona manokana. Nefa na izany aza, nipoitra tao Beiroty ireo vondrona tanora maro tsy manohitra ny sekta ary mikatsaka ny fandriampahalemana sy hiezaka hiaro an'i Libanona amin'ny fihavian'ny ady an-trano toa tsy azo ialàna na ny herisetra tahaka izay miseho any amin'ny faritr'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina. Ny bilaogy libaney no namoaka ireny lohahevitra ireny, ary ny sasany toy ny fanorenana na fanamboarana ny tetezana (ara-bakiteny), loka ho an'ny sary tsara indrindra, ireo vazivazy ary ireo tsy fitovian-kevitra tamin'ny fiaraha-mitantana ny 14 Martsa. Ireto misy santionan-dahatsoratra nangoniko :
Firy ireo karazana vondrona na sekta libaney no mifankahalala ? Toa vitsy an. Izany no fototry ny fifankahalàna, eny hatramin'ny ady mihitsy aza, araka ny fihevitr'i Abu Ali :
Nisy namana tsy foiko nitantara tamiko vao haingana : ” Antenaiko fa hanomboka hiasa tahaka ny tena Libaney ny Shi'a, mba hahafahantsika miaina ny fiainantsika sy hanangana ny firenentsika”. Nanontaniako izay fantany momba ny Shi'a sy momba ny any Atsimo izy, ary novaliany tamim-pahatsorana miaraka amin'ny lisitr'ireo hevitra efa mahazatra, izay ahitàna ny fironan'ny Shi'a ho amin'ny fanasazian-tena. Nanamafy tamiko indray ny tst dia fifankahalalan'ny Libaney loatra ny resakay. Tsy tokony hamaivanina izany zavatra izany : mahatonga ny tahotra sy ny ahiahy ilaina mba handranitana ny fankahalàna ireo antokom-pivavahana sy ny ady an-trano ny tsy fahalalàna […]
Ao anatinà firenena izay manana rafitra ara-politika miankina indrindra amin'ny rafi-pivavahana, dia mitombo amin'ny tsy fifankahalalàna (sy ny fifampiahiahiana) isika.
[Nanomana] tahirin-kevitra “fohy” momba ny Shi'a aho sy momba ny Jabal Amel, ilay tendrombohitry ny Shi'a any Atsimon'i Libanona…
Ny maha-mpikambana aminà antokom-pivavahana sy ireo endri-pamantarana hafa mandrakariva no mialoha làlana ny maha-izy azy ny libaney araka ny hevitr'i Walid Moukarzil, ary izany, hoy ny ambarany, no loharanon'ny olana mahazo antsika :
Tsy ny Libaney any Libanona no olana any Libanona. Ny andro hahatongavan'ny Libaney any Libanona no hitsaharan'ny olana.
Fa amin'i Sophia, ny sektarisma dia rakotra nampiasaina fotsiny ihany mba hamoretana sy hampihorohoroana ireo feo tony sy liam-pivoarana any Afovoany Atsinanana :
Tsy ny sektarisma mihitsy no fototry ny zava-miseho any Libanona, Iràka, eny fa hatrany Gaza. Fitaovana fotsiny hanatanterahana zavatra hafa ihany izany, fitaovana hampihorohoroana ny olona ao anatin'ny vondrom-piarahamonina misy azy amin'ny alàlan'ny fampanginana ireo feon'ny fitoniana sy fahendrena mba hahafahan'ny tsy fahaiza-manao, ny kolikoly ary ny halatra ataon'ny mpifehy antsika hizotra toyny tsy misy mahita. Isaky ny tabatabaina ny teny fanevan'ny mahery fihetsika dia misy feo tony am-polony tsy heno.
Mitantara ny fanesoana ataon'ireo tsy tia ny sekta izay manohana ny mpitarika sekta sy ny fihatsaram-belatsihy sy/na ny tsy fahaizan'reo vondrona vaovao sasany izay miady amin'ny sektarisma i Bech :
Mampihomehy ny tsy fananan'ny Libaney fahaiza-mamorona mba hanaovana hetsika firaisankina, fanangonan-tsonia, fijoroana ara-politika sns… izay manome voninahitra ny tsy fahaleovany tsy miankin-doha. Hetsika mahaliana indrindra tamin'ny rehetra ny “tsy fiandaniaa amin'ny atsy na ny aroa”, satria raha ny marina, nisosa tsy nahy tamin'ny lafiny iray izy ( ny governemanta, ny faha-14 Martsa).
Tanisain'i Sietske in Beirut sy faritany ny sasany amin'ireo vondrona vaovao izay vao haingana no nampahafantatra ny fisiany ao Beiroty :
Fa ny hitako mahavariana kokoa dia ny isan'ireo hetsika libaney izay mampiseho ny tsy hafaliany amin'ireo mpilalao politika amin'izao fotoana izao. Mitsiry tahaka ny holatra izy ireo. Miaina amina poitika ve ny libaney nony farany ? Toerana ipetrahana fohy…
Mety hiatrika fisintahana ny vondron'ny 14 Martsa ( mpomba ny governemanta/manohitra ny Syriana ) araka ny fanamafisina nataon'ny MFL tamin'ny Rafi Madayan izay milaza fa hiala ao sady niampanga azy ireo ho nanararaotra ny maritioran'ny 14 Martsa sy nandrava ny nofinofin'ny tanora Libaney.
Manana lahatsoratra momba ireo ezaka sy fanampiana ara-bola nomen'i Etazonia sy Iràna mba hananganana indray ireo tetezana sivifolo rava sy potik'i Israely nandritra ny fanafihana nataony tamin'ny fahavaratra lasa teo ny Lebanese.
Etsy andanin'izany, inty misy vazivazy kely omen'i Ahmad momba ireo mpanao politika, mpangalatra ary mpanamboatra rindrambaiko:
Nisy ramatoa iray mpanao politika, mpangalatra iray, ary mpamorona rindrambaiko iray maty ary nivantana tany amin'ny helo.
Niteny ilay mpanao politika “Malahelo ny fireneko aho. Te-hiantso ny fireneko aho ary hijery ny ataon'ny olona any.” Niantso nandritra ny 5 minitra izy, ary avy eo nanontany “ry devoly, ohatrinona no alohako amin'izay antso izay ????
“Dimy tapitrisa dolara” hoy ny devoly
Nanoratra seky ho azy ilay mpanao politika ary niverina nipetraka teo ambony sezany.
Nialona ilay mpangalatra, nanomboka nikiakiaka izy, “Anjarako zao, te-hiantso ireo mpikambana tao amin'ny vondrona nisy ahy aho, te-hahafantatra izay ataony any ihany koa aho” Niantso izy ary niresaka nandritry ny 2 minitra teo ho eo, avy eo nanontany ” ry devoly, ohatrinona no alohako amin'izay antso izay ?????
“Folo tapitrisa dolara” hoy ny devoly
Hita soritra teny amin'ny endriny ny fireharehany, nanoratra seky izy dia niverina nipetraka.
Vao mainka nanaitra ny hambom-bon'ilay mpamorona rindrambaiko izany ary nanomboka nikiakiaka izy : ” Te-hiantso ny namako ao amin'ny IT ihany koa aho”, Niantso olona hafa ao amin'ny IT izy ary niresaka momba ny karazana teknolojia sy ny Mpitantana Tetikasa, niresaka ka niresaka ka niresaka nandritra ny roapolo ora avy eo nanontany “ry devoly, ohatrinona no alohako tamin'izay antso izay ????
“Roapolo dolara”, hoy ny devoly.
Gaga ilay mpamorona rindrambaiko ary niteny ” Roapolo dolara???? fotsiny ????”
“Antso eto an-toerana ny avy aty amin'ny helo mankany amin'ny helo”, hoy ny devoly.
Farany, zarain'ny finkployd ireo sary sasany nahazo loka tamin'ny Fifaninanana Sary 2006 nampanaovin'ny World Press, indrindra fa ireo sary nalaina nandritra sy taorian'ny fidarohan'i Israely baomba an'i Libanona tamin'ny Jolay-Aogositra 2006.